Momba anay - Edlon Wood Products Co., Ltd.
Edlon Wood Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2003, tao afovoan'i HuaiHai ara-toekarena, manankarena loharanon-jiro sy mpiasa mahay. Mifantoka hatrany amin'ny vahaolana vita amin'ny hazo amin'ny fananganana sy ny fanamboarana fanaka izahay, ny vokatra lehibe ao anatiny dia misy ny loharanom-pitondrana, FILM FACED PLYWOOD, DOKIM-PIVAVAHANA DOKOLOMPOANA ary HPL PLYWOOD, karazana birao laminate misy ny PETG, ACYLIC, PVC, MELAMINE ..... .
Mikatsaka ny fampiasana maharitra ny kitay amin'ny alàlan'ny kalitao voalohany isika, manorina anarana tsara sy madio EDLONWOOD foana, izay manome antoka ny fitsipiky ny fahitsiana sy avo lenta amin'ireo mpanjifa sarobidy.
Ny fomba famokarana plywood
Fehezina mafy ny fizotran-javatra rehetra hahatsapa kalitao maharitra, fanaterana ny fotoana sy ny vidiny mora voafehy
Ny kalitao aloha no iantohan'ny rafitra fitantanana kalitao ISO. Voamarina ara-dalàna ny EU. Fanamarinana CE; ISO9001: 2000 rafitra fitantanana kalitao; Ny fanamarinana ny CARB amerikana ary dia hentitra isika hifanaraka amin'ny fenitry ny kalitao GB sy HPVA. Nifanaraka tsy tapaka tamin'ny "kalitaon'ny fahavelomana, lazany sy ny fivoaran'ny fiarovana, ny fitantanana hentitra ho an'ny fahombiazana" filozofia ara-piasana ary mazoto mampihatra ny fenitra GB / T9001-2000 sy ny rafitra fitantanana kalitao. Ny rafitra fitantanana kalitao 5S dia fampiharana henjana, afaka manatsara ny fahafaham-po amin'ny kalitao tsara.
Azo omena vidiny ny fifaninanana satria ny orinasa dia hita ao afovoan-tany ara-toekarena HuaiHai, mifanila amin'i JiangSu, ShanDong, HeNan, AnHui, afovoan'ny faritany efatra, ho an'ny haben'ny fitaterana lozika lojika, ary eo akaikin'ny seranan'i QingDao sy LianYunGang izahay. Manankarena amin'ny fitaovana vita amin'ny hazo sy ny asa an-tery nefa mahay, dia manome antoka fa mifaninana sy lafo vidy tsara ny vidinay ary lafo vidy.
Ny serivisy tsara indrindra, ekipa varotra matihanina, serasera mifanentana ary tahirin-kevitra tsara dia hahatonga anao ho mpanjifa afa-po. Miorina amin'ny fahatsorantsika tsara, ny foto-kevitra voalohany kalitao, ny vidiny mifaninana ary ny serivisy tsara indrindra, te-hizara ireo harena manankarena Shinoa amin'ny mpanjifantsika mendrika isika hahazo tombontsoa lehibe indrindra rehefa miatrika an'i Edlon.